8 Ɔhene Belsasar+ ahenni afe a ɛto so abiɛsa mu no, me Daniel, minyaa anisoadehu bi, kan de a minyae no akyi.+ 2 Minyaa anisoadehu, na bere a mihui no, na mewɔ Susan+ abankɛse a ɛwɔ Elam+ mantam mu no mu; mihui wɔ anisoadehu no mu sɛ mewɔ Ulai+ asubɔnten no ho. 3 Bere a memaa m’ani so hwɛe no, hwɛ, na odwennini+ bi gyina asubɔnten no ano; ɔwɔ mmɛn abien. Ná mmɛn abien no woware, nanso biako ware sen biako, na nea ɛware no na ɛbae akyiri yi.+ 4 Mihuu odwennini no sɛ ɔresisi kɔ atɔe ne atifi ne anafo, na aboa biara ntumi nnyina n’anim, na obiara nni hɔ a otumi gye obi fi ne nsam.+ Ɔyɛɛ nea ɔpɛ na odii akokurokosɛm. 5 Migu so redwinnwen ho no, hwɛ, ɔpapo+ bi fi atɔe bae a ɔnam asase nyinaa ani a ne ho nka fam. Ná ɔpapo no wɔ abɛn bi tua n’aniwa ntam.+ 6 Ɔbae ara beduu odwennini a ɔwɔ mmɛn abien a mihuu no sɛ ogyina asubɔnten no ano no ho, na ɔde abufuw kɛse tuu mmirika kɔɔ no so. 7 Na mihui sɛ bere a oduu odwennini no nkyɛn no, n’ani beree no so na osii odwennini no bubuu ne mmɛn abien no, na odwennini no annya ahoɔden a ɔde begyina n’anim. Enti ɔtow no kyenee fam tiatiaa no so, na odwennini no annya obi a obegye no afi ne nsam.+ 8 Ɔpapo no dii akokurokosɛm+ boroo so. Nanso bere a ɔyɛɛ den no, abɛn kɛse no bui, na mmɛn anan fifi sii ɛno ananmu kyerɛkyerɛɛ ɔsoro mframa anan no.+ 9 Na abɛn foforo fi biako mu bae. Ná ɛyɛ abɛn ketewa,+ na ɛyɛɛ kɛse boroo so, na ɛde n’ani kyerɛɛ anafo ne apuei ne Asase Fɛfɛ no.+ 10 Ɛyɛɛ kɛse ara koduu ɔsoro asafo no nkyɛn,+ na ɛmaa asafo no bi ne nsoromma+ no bi tetew beguu fam, na etiatiaa wɔn so.+ 11 Na edii akokurokosɛm ara koduu asafo no Safohene+ so, na woyii daa afɔre+ no fii Safohene no anim, na wɔtow ne kronkronbea a etim hɔ no kyenee fam.+ 12 Na mmarato+ nti, wɔde asafo no ne daa afɔre+ no hyɛɛ ne nsa,+ na ɛtow nokware+ kyenee fam+ yɛɛ nea ɛpɛ, na esii no yiye.+ 13 Na metee sɛ ɔkronkronni+ bi rekasa, na ɔkronkronni foforo bisaa obiako a ɔrekasa no sɛ: “Da bɛn na daa afɔre+ ne mmarato a ɛma amamfoyɛ ba+ ne kronkronbea ne asafo no a wotiatia wɔn so+ ho anisoadehu no bɛkɔ akosi?” 14 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Ɛbɛkɔ akosi anadwo ne anɔpa mpem abien ne ahasa, na wɔbɛma kronkronbea no asi ne dedaw mu.”+ 15 Na ɛbae sɛ, me Daniel, migu so rehwɛ anisoadehu no na merehwehwɛ sɛ mɛte ase no,+ mihui, na hwɛ, obi begyinaa m’anim a wohwɛ no a, ɔte sɛ ɔbarima.+ 16 Na metee onipa bi nne fii Ulai+ asubɔnten no mu, na ɔteɛɛm frɛe sɛ: “Gabriel,+ ma oyi nte nea wahu no ase.”+ 17 Enti ɔbaa nea migyina hɔ. Nanso bere a ɔbae no, mebɔɔ hu, na mede m’anim butuw fam. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Onipa ba,+ te ase+ sɛ anisoadehu no fa awiei bere no ho.”+ 18 Bere a ɔne me rekasa no, medae hatee a m’anim butuw fam.+ Enti osoo me mu san de me gyinaa faako a na migyina no.+ 19 Na ɔkae sɛ: “Hwɛ, merema woahu nea ɛbɛba abufuw bere no awiei, efisɛ ɛfa awiei bere a wɔahyɛ no ho.+ 20 “Odwennini a wuhuu no a ɔwɔ mmɛn abien no gyina hɔ ma Media ne Persia+ ahene. 21 Ɔpapo a ne ho wɔ nhwi bebree no nso gyina hɔ ma Hela hene,+ na abɛn kɛse a ɛwɔ n’aniwa ntam no gyina hɔ ma ɔhene a odi kan no.+ 22 Na nea ebui a anan fifi sii ananmu no nso,+ ahenni anan bɛsɔre wɔ ne man mu, nanso wɔn ahoɔden rennu ne de no. 23 “Na ɛrekɔ wɔn ahenni no awiei, bere a mmaratofo nneyɛe adu ne pɔmpɔn so no, ɔhene tirimɔdenfo bi a ohu ahintasɛm mu+ bɛsɔre. 24 Ne tumi bɛyɛ den, nanso ɛrenyɛ n’ankasa ahoɔden so.+ Na ɔbɛsɛe ade+ ma ayɛ nwonwa, na nea ɔbɛyɛ nyinaa besi yiye. Ɔbɛsɛe ahoɔdenfo ne akronkronfo man+ no nso. 25 Ne nhumu nti, ɔbɛma nnaadaa akɔ so wɔ ne nsam.+ Ne koma mu nso, obedi akokurokosɛm,+ na asomdwoe bere mu,+ ɔbɛsɛe nnipa bebree. Na ɔbɛsɔre atia asafo ahene mu Safohene+ no, nanso obebubu a ɛnyɛ obi nsa na ebebu no.+ 26 “Anadwo ne anɔpa ho adehu a wɔaka ho asɛm yi yɛ nokware.+ Na wo nso, sɔ anisoadehu no ano, efisɛ ɛfa daakye nna ho.”+ 27 Na me, Daniel, meyɛɛ kagyaa, na meyaree nna kakra.+ Afei mesɔre kɔyɛɛ ɔhene adwuma no.+ Nanso nea mihui no nti, meyɛɛ bɔmm, na obiara ante nsɛm no ase.+